Lafta gareen oo qorsheynaya in uu tago deegaannada…
Hogamiyaha Dowlad Goboleedka KGS Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa bilaabay kulamo uu la yeelanayo Hogamiyayaasha DFS, Xildhibaanno, Ganacsato, Hay’ado kala duwan iyo cid waliba oo uu u arko in ay gacan ka geysan karto wax ka qabashada fatahaadda Wabiga Shabeelle.
Lafta Gareen waxa uu si cad u sheegay in dadka ku nool Degmada Afgooye oo ah halka ugu daran in ay ku sugan yihiin xaalad aan wanaagsaneen, biyaha oo guryaha qaar ka sare maray, cunno la’aan, barakac iyo cabsida laga qabo cudurada ka dilaaca.
“Fatahaadda Biyaha waxaa u dheer dadka ku nool Afgooye, Wanlaweyn iyo Qoryooley xaaladda caafimaad oo walwal badan laga muujinayo cudurada ka dhashay sida Kaneecada, Shuban biyoodka iyo kuwo kale, waa in gurmad degdeg ah oo looga hortagayo la gaarsiiyo” ayuu yiri Hogamiye Cabdicasiis.
Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo Shaqsiyaadka hantida heysta ayuu ka dalbaday in ay gacan qabtaan dadkaan oo maanta uga baahan kaalmo, maadaama ay wajahayaan mid kamid ah marxaladaha ugu adag.
Ilo wareedyo ayaa Axadle u sheegay in Hogamiyaha Dowlad Goboleedka KGS uu safar ku tagayo Degmada Afgooye oo ah meesha ugu daran dhibaatada fatahaadda biyaha wabiga gaarsiiyeen.